Eyes Ruva Kumira - Dhizaini magazini
Ruva Kumira Iwo maziso ndiwo maruva anomira nguva dzese. Muviri wechiyero wakakomberedzwa negoridhe nekuvhurika zvisingaite semaziso emunhu anogara achitsvaga zvinhu zvinoshamisa muAmai Zvisikwa. Icho chinomira chinoita kunge muzivi. Iyo inokoshesa runako rwechisikigo uye inoratidzira kumusoro kwepasirese kwauri kana usati iwe kana iwe usati wajekesa.
Zita rechirongwa : Eyes, Vagadziri zita : Naai-Jung Shih, Izita remutengi : Naai-Jung Shih.
Ruva Kumira Naai-Jung Shih Eyes